खेल अभिलेखागार - स्मार्टमे
ट्याग अभिलेखहरू: खेलकुद
डोम » "खेल" सँग ट्याग गरिएका प्रविष्टिहरू
कसरी चोर्ने मतलब लाखौं, यदि तपाईं धोका दिनुहोस्, यसको मतलब प्रतियोगिताहरू। खेलमा टेक्नोलोजिकल डोपिंग
डोपिंग, खेल, जासूस उपकरण, प्रविधि
मानिसहरुको प row्क्ति संग घोडा जसले आफ्नो जीवनमा minutes मिनेट सम्म कहिले पनि कम्प्युटर गेम खेल्दैन। र उनीहरूको लागि बोनस घोडा प row्क्ति जो खेलमा कहिल्यै धोका दिईएको छैन, उदाहरणका लागि ...
के तिमी घरमा बसिरहेका छौ? तपाईं जहिले पनि एक सानो कसरत गर्न सक्नुहुन्छ!
खेल, xiaomi youpin, youpin
नयाँ उपकरणहरू सियामी Youpin मा देखा पर्‍यो जुन घरमा तपाईंको समयलाई रमाइलो बनाउँदछ। एक व्यायाम किट कि तपाइँ फिट रहनेछ। व्यायाम सेटमा एक बार, डम्बल, केटलबेल र उपयुक्त वजन हुन्छ। निर्माता ...
नयाँ mioPod ले तपाईंको प्रकोष्ठबाट तपाईंको मुटुको दर मापन गर्दछ
द्वारा प्रकाशित	ओला
mio, म्यापोड, खेल, स्वास्थ्य
MioPod अर्को उपकरण हो जुन खेल उत्साहीहरूले स्वेच्छाले स्टक गर्नेछ। जो प्रशिक्षण र व्यायाम को लागी, मुटुको दर मापन उपकरण को एक धेरै महत्त्वपूर्ण कार्य हो। एक साधारण स्मार्टवाच पर्याप्त नहुन सक्छ, र अधिक सही मापन ...